Kedu ihe m ga-ama banyere profaịlụ redirect na saịtị iji bulie SEO m?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị jiri mmalite na-amalite. E nwere naanị ụdị njikọ atọ dị mkpa na saịtị gị na saịtị profaịlụ ga-enwe mmasị na ịbịakwute ọganihu SEO n'ogologo gị.Ya mere, maka mmalite, ị ga-aghọta ụdị njikọ ị nwere ike ịgụnye na njirimara njikọ njikọ gị - ụfọdụ n'ime ha na-arụ ọrụ maka SEO, ma ndị ọzọ anaghị eburu mmetụta ahụ dị n 'ụzọ ụgbọ okporo ụzọ gị na ikwe mma na ntanetị n'ịntanetị, ọ dịkarịa ala ozugbo.
Nzube ọ bụla nwere nchịkwa Backlink E wuru ya:
Njikọ dị n'ime - na - ejikọta ibe na ngalaba dị n'ime otu weebụsaịtị ma ọ bụ blog. Site n'otu aka, njikọ dị n'ime ya dị mkpa maka ezi echiche nke ntanetị nke saịtị ga-eme ọganihu ọ bụghị nanị maka nlegharị anya nke onye na-eme nchọgharị kama ọ nwere ike ịdị mma maka ngwa ngwa na nhazi nke kachasị mma site na ịchọpụta bots. N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, usoro ntọala siri ike bụ n'onwe ya nke nwere onwe ya nke nwere ike inye akara ngosi dị mma na ọ bara uru ịbụ ndị na-enyocha ndị na-eme nchọpụta - malaga vacation rentals	55. Rịba ama: njikọ dị n'ime njikọ ọ bụla na akaụntụ profaịlụ ọ bụla adịghị enwe mmetụta na-emetụta ya na okporo ụzọ weebụ, yana SEO n'ozuzu. Ọ bụ naanị iwu nke egwuregwu - na ịgbaso iwu nwere ike ịkwụ ụgwọ, ọ dịkarịa ala oge ruo n'oge, ziri ezi?
Njikọ ndị dị n'èzí - ewepụtara n'ozuzu, a na-eji ụdị njikọ a kpọmkwem maka ebumnuche SEO. Ịbụ n'etiti ihe ndị kachasị njọ na ndị isi engines dị ka Google n'onwe ya, yana Yahoo na Bing, njikọ ndị ọzọ na-ejikọta ndị na-agụ akwụkwọ weebụ gị ma ọ bụ blog na ebe ndị ọzọ nke ụwa n'ịntanetị.Na ebe a, otu setịpụtrị nke usoro njikọ kachasị dịka (dịka PageRank, Domain Authority, User Trust, Page Authority, wdg.). Ya mere, ọ bụla nchịkọta akụkọ profaịlụ na-achọ ịnweta ha niile n'ọtụtụ kachasị - ha nwere ike ịmepụta ike siri ike maka engines na-achọpụta na ebe nrụọrụ weebụ dị otú ahụ ma ọ bụ blog ga-egosi na n'elu SERPs.
Njirimara Njikọ nwere ike ịchị ụwa
Nke ọma, blog gị ma ọ bụ profaịlụ backlink na saịtị bụ n'ezie dị mkpa karịa ka i nwere ike iche. M na-ekwu na njikọ dị elu na njikwa dị ike na PageRank na ngalaba Authority pụtara na ị bụghị nanị na a tụkwasịrị obi ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya na Intanet ma na ọdịnaya nke aka gị dị iche iche ma na-enye ọtụtụ ihe bara uru - na ndị ọzọ gafee weebụ enweghi ike inye aka kama wepuga ma weputa otu akụkụ nke aka ha - na ntaneti nke aka gi ma o bu ibe gi.
Ihe na-eme ka ezigbo Backlink na SEO
1. Ezi ọdịdị - ọ pụtara na njikọ ọ bụla na profaịlụ gị wuru n'enweghị ihe ọ bụla, na-enweghị akụkụ ọ bụla na-akwụ ụgwọ, aghụghọ ma ọ bụ nkwekọrịta njikọ njikọ njikọ.
2. Mmetụta dị ọcha - na-anọchite anya ikike ha nwere iji tụnyere isi isiokwu ma ọ bụ mkparịta ụka iji mee ka ọ bụrụ naanị ịzụ ahịa weebụ na-echekwa ihu na ihu abụọ nke azụmahịa ahụ.
3. Nchịkwa na ntụkwasị obi - bụ nkọwa njirimara nke onwe ya, dịka ihe ọ bụla na-eme azụ azụ nke nwere ike ịfefe akụkụ nke "ihe njikọ njikọ" ahụ dị omimi ga-adị ike,. e. , ọ ga-esite na ebe ndị a ma ama mara nke ọma nke na-egbo mkpa nke ndị ọrụ ndụ.